Nhau - Iyo Kambani Kutengesa Kuwedzera Zvakare Kupesana Neisina Kushaya Kudiwa muHafu yekutanga Yegore Iri
Kubva kutanga kwegore ra2014, mitengo yezvinhu zvetungsten mbishi zvairamba zvichidzika, mamiriro emusika ari pamamiriro asina kugadzikana zvisinei nemusika wekunze kana musika wekunze, kudiwa kwacho hakuna kusimba. Iyo indasitiri yese inoita kunge iri muchando inotonhora.
Kutarisana nemamiriro ezvinhu akakomba emusika, kambani inoedza nepese painogona napo kuti itengese mhando yekutengesa nekuvandudza nzira itsva dzekutengesa, panguva ino, kambani inoendesa zvinhu zvitsva kumusika kuitira kuti iwane mukana mutsva uye migove yakawanda yemusika.
Muhafu yekutanga yegore ra2015, zvigadzirwa zvikuru zvekutengesa zvakawedzera zvakare zvichienzaniswa nenguva yakafanana gore rapfuura, pahwaro hwekuti kutengesa kwa2014 kwakawedzera zvakanyanya kupokana nekutengesa kwa2013.
Tungsten simbi yeupfu uye carbide powders yekutengesa zviyero zvakasvika kusvika anopfuura mazana maviri metric matani pamwedzi mumwedzi mitatu yapfuura. Izvo zvekutengesa zvinorova zvakakwirira zvezvakaitika kare. Kusvika pakupera kwaJune, huwandu hwekutengesa i65.73% yegore rino 'kutengeswa kwakarongwa, zvakare iri 27.88% yakakwira kupfuura kutengesa kweiyo imwe nguva yegore rapfuura.
Cemented carbides kutengesa huwandu i3.78% yakakwira kupfuura kutengesa kweiyo imwe nguva yegore rapfuura.
Precision zvishandiso zvekutengesa huwandu i51.56% yegore rino 'yakarongedzwa kutengesa, uye 45.76% yakakwira kupfuura kutengesa kweiyo imwe nguva yegore rapfuura, zvakare yakarova nhoroondo yepamusoro.
Carbide Kucheka Maturusi, Carbide Zvishandiso, Cemented Carbide, Yakasimba Carbide End Mills, Yakasimbiswa Carbide Endmill, Azvikuya Cutter,